सर्जिकल मास्कले प्रदूषणको जोखिम बढाउने अध्ययनको निष्कर्ष
लन्डन । सर्जिकल मास्कले वातावरणलाई दूषित गर्ने सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको स्वानसी विश्वविद्यालयका अध्येताको टोलीले गरेको अध्ययनले सर्जिकल मास्कले रासायनिक प्रदूषण तथा नानोप्लाष्टिक उत्सर्जन गर्न सक्ने औँल्याएको हो ।
प्रयोग गरेर फालिएको यस्ता मास्क पानीमा डुबाउँदा धातु र प्लास्टिक फाइबर निस्किएको भन्दै वैज्ञानिकहरुले यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । “महामारीअघि हामी प्लास्टिक स्ट्र, प्याकेजिङ घटाउने विषयमा काम गरिरहेका थियौँ । तर, अहिले सयौँ, हजारौँ मास्क डिस्पोज गरिरहेका छौँ,” अध्ययन टोलीका प्रमुख डा. सार्पर सार्पले भने, “हामीले हाम्रा प्राथमिकतालाई क्रमबद्ध गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले महामारीबाट जोगिन र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि वातावरण संरक्षण गर्न कदम चाल्न आवश्यक छ ।”
गत वर्षको नोभेम्बरसम्म अध्ययनकर्ताको ध्यान वातावरणमा प्लास्टिकले पार्ने प्रभावको विषयमा मात्र केन्द्रित थियो । तर, पछि धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्दै जाँदा उनीहरुले मास्कमा धेरै रसायनहरु भेट्टाए । यी रसायनहरु मास्क उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिने रङहरुसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । परीक्षण गरिएका हरेक मास्कबाट हानिकारक रसायन निस्किएको थियो ।
अध्ययनकर्ताहरुले लिड (सिसा), एन्टिमोनी र क्याडमियमजस्ता बढी भार भएका धातुहरु भेट्टाएका छन् । यस्ता धातुहरु निकै सानो परिमाणमा भेटिएका बताइएको छ । यद्यपि, बढी भार हुने यस्ता धातुहरु सञ्चित भएर लामो समयसम्म रहने स्वानसी विश्वविद्यालयका डा. गेराएन्ट सुलिवान बताउँछन् । यसको अर्थ यी धातुमा मिसिएपछि पानीबाट छुट्ट्याउन सकिँदैन र समयान्तरमा झनै धेरै सञ्चित हुँदै जान्छन् ।
यो समस्या तत्कालका लागि ठूलो नदेखिए पनि यसले भविष्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने डा. सार्प बताउँछन् । “मास्क लगाउनुको फाइदा धेरै छ । यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, मास्कको मानकीकरण र मास्क बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरको विषयमा भने फरक नियम बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने ।
बीबीसी । अरोरा स्टेसनले अन्तिरक्षमा, दुनियाँकै पहिलो होटल बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यस सम्बन्धी आधिकारिक घोषणा क्यालिफोर्नियास्थित गत अप्रिलको... २३ मिनेट पहिले